Iimilo abavelisi abajikelezayo kunye nababoneleli - iTshayina Shape Refractory Factory
Alumina bubble isitena yenye yezixhobo ultra-high ubushushu izinto okonga umbane. Isebenzisa i-alumina sphere sphere njengeyona nto iphambili ekrwada kwaye idibanisa nezinye izibophelelo ukutshisa i-alumina emigodini engenamngxunya kwiziko lobushushu eliphezulu ngo-1750℃. Aluminaisitena sebhola sinempawu zokuqhuba kwe-thermal esezantsi, ukulondolozwa kobushushu okuhle, amandla aphezulu okucinezelwa, kwaye sinokusebenza kumaqondo obushushu angaphantsi kwe-1800°C. Inokumelana nobushushu obugqwesileyo kunye neepropathi zokugquma ubushushu, kunye nokugcina amandla okugqwesileyo.
Umbhobho weZircon wenziwe ngezinto ezinobushushu obuphezulu, kwaye unokusetyenziselwa ukuqhagamshela inkqubo, edlala indima enkulu ekulawuleni ukuhamba kwentsimbi etyhidiweyo. Umbhobho wokulinganisa we-zirconium wothukile kwaye uxhathise ubushushu, uzinzo oluphezulu kakhulu, kwaye unomsebenzi othile wokulwa umhlwa. Umlomo wombhobho we-zirconium unokuqinisekisa ngokuzinza kokungena kwentsimbi etyhidiweyo kunye nokuqinisekisa ukwenziwa kwesiqhelo kwenkqubo yokulungisa.
Umbhobho wokulinganisa we-zirconium unokuphucula uzinzo lwenkqubo. Ngenxa yokuba yenziwa kubushushu obuphezulu kunye noxinzelelo oluphezulu, amacebo ahlukeneyo anokwenziwa ngokweemfuno ezahlukeneyo zabasebenzisi, ke ayinakuqinisekisa kuphela inkqubela phambili yenkqubo, kodwa ikwaphucule ukusebenza kwemveliso.
Isigqubuthelo selad esaziwa nangokuthi ngumkhono okhuselayo, sisetyenziswa ikakhulu phakathi kweleli kunye ne-tundish. Yinxalenye ebalulekileyo yonxibelelwano phakathi kweladi kunye ne-tundish. Inxalenye esezantsi yeladi ephezulu yokuqhagamshela inxulunyaniswe nendawo yokuphuma yamanzi yesixhobo esitshixayo, kwaye isiphelo esisezantsi sinwenwela kwisandi. Ithintela isinyithi esinyibilikayo ukuba singene emanzini kwi-ladle ekubeni iphinde yenziwe i-oxidized kwaye itshizwe; ikhusela intsimbi etyhidiweyo kwi-oxidation yesibini ngexesha lokuphosa, iphucula umgangatho wentsimbi etyhidiweyo; kunciphisa ukubekwa kweemveliso ze-oxide kwisinyithi eludongeni lwangaphakathi lwemilomo, kwaye kwandisa ubomi benkonzo.
Isiciko seTundish yintonga enqabileyo efakwe kwibhakethi yentsimbi ukulawula ukuvulwa kunye nokuvalwa kwemilomo kunye nokuhamba kwentsimbi etyhidiweyo ngokuphakamisa ukufuduswa, okwaziwa nangokuthi kukumiswa kwebumbi. Yenziwe ngumbindi wentonga, isitena semikhono kunye nezitena zeplagi. Isiseko seentonga sihlala senziwe ngentsimbi yecarbon yentsimbi engqukuva enobubanzi obungu-30-60mm. Isiphelo esingaphezulu sinxibelelene nengalo yomnqamlezo yendlela yokuphakamisa iibholiti, isiphelo esisezantsi sidityaniswe nezitena zeplagi ngemisonto okanye izikhonkwane, kunye nesitena semikhono esembindini. ngaphezulu kweeyure ezingama-48 ukunqanda iingozi zokuqhekeka ezibangelwa kukuqhushumba okungathethekiyo.
Intonga yokumisa ifakelwe kwisanti xa isetyenziswa. Isantya sokuhamba kwentsimbi etyhidiweyo engena kwisikhunta sinokuhlengahlengiswa ngokulawula indawo yentloko yentonga yokumisa kumbhobho omkhulu, kwaye iargon inokuvuthelwa kwi-tundish ngokusebenzisa umngxuma we-argon ovuthela ukuthintela umlomo ukuba ungavalwa.
Iplagi yePoror kunye neSihlalo seBhloko elungileyo
Isitulo ibhloko elungileyo yenziwe nge-corundum, chrome corundum kunye ne-corundum spinel. Yimveliso exhasayo yezitena ezahlukileyo neziphefumlelweyo, ezinamandla aphezulu okushisa, ukuzinza okuhle kwe-thermal, ukumelana nesikhuselo kunye nokumelana ne-slag. Isitena esiphefumlayo sinokuyikhusela ngokufanelekileyo isitena esingundoqo esiphefumlayo, kwaye sesona sixhobo sixhasayo siphambili sokuqinisekisa ukuphunyezwa ngokugudileyo komsebenzi ophantsi weargon.
Iiplagi ezijikelezayo luhlobo lwemveliso entsha enobomi obuphezulu, ukugcina amandla kunye nokunciphisa ukusetyenziswa. Uyilo lolwakhiwo lusengqiqweni, kwaye luzinzile kakuhle kwi-thermal, anti-erosion, anti-erosion, kunye ne-anti-permeability. Inempawu zokuphakama okuphezulu, ukusebenza okuthembekileyo kunye nobomi benkonzo ende.